Somalia: Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Magcaabay Guddida Farsamo Ee Shirka Lagu Xallinayo Khilaafka Doorashada Laysku Khilaafay - #1Araweelo News Network
Somalia: Ra’iisal Wasaare Rooble Oo Magcaabay Guddida Farsamo Ee Shirka Lagu Xallinayo Khilaafka Doorashada Laysku Khilaafay
Muqdisho(ANN)-Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudada xilkeedu dhammaaday, ayaa magwacday guddi farsamo oo gogol xaadh u ah shirka gollaha wadatashiga Qaranka.
Qoraal kasoo baxay Villa Somalia, ayaa lagu shaaciyay magcaabista xubaha guddida, iyadoo ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble soo saaray magcaabista xubnaha oo ka kooban Xukuumadda Federaalka ah, Dawlad gobolleedyada xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir.
Magcaabista kasoo baxday xaf’iiska ra’iisal wasaaraha oo nuqul ka mid ah soo gaadhay shebekaddaha Araweelo News Network, ayaa u dhignayd sidan:-
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka kooban Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, Dowlad Gobolleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Guddiga farsamo ayaa u gogol xaarayaa Shirka Golaha Wadatashiga Qaranku ay isugu imanayaan kaasoo lagu dhammeystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeyay Dowladda Federaalka, Dowladaha Xubnaha ka ah iyo Gobolka Banaadir.
Xubnaha guddida uu Ra’iisal Wasaaruhu magacaabay waxa ay kala yihiin;
Ra’iisal Wasaare Rooble ayaa u rajeeyay guddida in ay u gutaan waajibaadka loo igmaday si hufan oo ay xilkasnimo ku jirto.